Oradyahan Kenyan ah oo sheegay in uusan daroogi isticmaalin - BBC News Somali
Oradyahan Kenyan ah oo sheegay in uusan daroogi isticmaalin
3 Maajo 2018
Asbel Kiprop oo Kenyan ah horayna ugu guulaystay oradka Olambigga ee 1500 ee mitir ayaa sheegay in uu caddayn doono in uu yahay nin nadiif ah ka dib markii uu ku dhacay shaybaar daroogo oo laga qaaday.
Ciyaaryahanku tartan kuma jirin marka laga qaadayay baaritaankan.
Ciyaaryahankan 28 jirka ah oo saddex jeer orad ku guulaystay ayaa la sheegay in dhiigiisa laga helay dawada EPO oo mamnuuc ah dhiigana siyaadisa.
Kiprop ayaa kaalinta labaad ka galay tartankii Olambigga ee magaalada Beijing lagu qabtay 2008dii, billadda dahabka ah ayaase la gudoonsiiyay markii dambe ka dib markii Rashid Ramzi oo Baxrayn u ordayay uu ku dhacay baaritaan daroogo oo lagu sameeyay.
Sacuudi Carabiya iyo dalalka kale ee u soo baxay Koobka Adduunka
Gabadh Kenyan ah oo caanku ah oradka ayaa jirkeeda laga helay dawo la mamnuucay
War qoraal ah oo uu soo saaray Kiprop ayuu ku sheegay in uusan xirfaddiisa "u kharibaynin" daroogo darteed.
"Kaalinta hore ayaan kaga jiraa ladagaalanka daroogada ee Kenya - waana arrin aan aad u aaminsanahay una taageero," ayuu yiri Kiprop oo ah qofka shanaad ee ugu xawaare dheeer tartanka oroddada ee 1500 ee mitir.
"Ma doonayo in aan kharibo wixii aan soo shaqaysanayay tan iyo markii aan tartanka caalamiga ah billaabay sannadkii 2007dii . Waxaan rajaynayaa in aan caddayn doono in aan ahayn ciyaartoy nadiif ah.